စေးကပ် post ကို By အိုလီဗာ Bienkowski On 21 ။ ဇန်နဝါရီလ 2020
@Wikileaks ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ အမေရိကန်အစိုးရ၏ရန်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆို #JulianAssange လန်ဒန်ရှိသူ၏ထိန်းသိမ်းရေးကနေ။ ဘုရင်မကြီးကသူ့ကိုချက်ချင်းခွင့်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ပေးရမယ်။
10 ။3ရက်ပေါင်းမတိုင်မီထောင်ချခံရ - Carl Puigdemont
ဖိအားနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပြုလုပ်ထားကြောင်းသေချာစေပါ - သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပံ့ပိုး! ပိုကောင်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးအတွက် - အလှူရှင်တစ်ဦးအဖြစ်, သင်အများပြည်သူဒေါသ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအလှူငွေလုပ်နေပါတယ်။ ယခု join နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှတစ်ဦးကွန်ကရစ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အရှုပ်တော်ပုံပါစေ။ သငျသညျဘယ်နေရာမှာငါတို့ဥစ်စာအဖြစ်လှူဒါန်းခဲ့သည်အသီးအသီးယူရိုဘို့ဤမျှလောက်ပုန်ကန်မှုများနှင့်တော်လှန်ရေးအရပါလိမ့်မယ်။ ကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုပေးပါ: PixelHELPER.org/Spenden သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကရံပုံငွေရှာuinterstützt:
#Puigdemont များအတွက် Freedom ကိုဘာလင်ထဲမှာရှတာဇီအကျဉ်းထောင်အပေါ်ရေးထိုး။ ကျနော်တို့စပိန်အားလုံးကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆို Spanien.Wir အတွက်ကာတာလနိုင်ငံရေးသမားများ၏တရားမဝင်, #Stasi အလားတူထိန်းသိမ်းရေးဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြသည်။ #PixelHELPER ချက်ချင်းဂျာမဏီကနိုင်ငံရေးသတ်မှုများလျော့ချပေးရန်မဟုတ်ကြောင်းကြေညာရန်အစိုးရကိုတောင်းဆိုထားသည်။ မသက်ဆိုင်တရားရုံးများ၏ဥပဒေရေးရာဆုံးဖြတ်ချက်များ - စပိန်၏ထိုသို့သောနိုင်ငံရေးအခွင့်ပြုချက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာအကူအညီများအပေါ်ပညတ်တရား၏စည်းမျဉ်းများအရသိရသည်လိုအပ် rogatory ။ တရားမျှတရေးဝန်ကြီး Katarina မုယောစပါး၏ပုံစံအတွက်အမှု၏အရေးပါမှု, ဖက်ဒရယ်အစိုးရအားအခွင့်အာဏာပေးအပ်။ ကျနော်တို့ Carl Puigdemont တစ်ဦးကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်များအတွက်ဖက်ဒရယ်အစိုးရအပေါ်ကိုပဌနာဂျာမန်အကျဉ်းထောင်မှာပေးရမညျ!
ဖိအားနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပြုလုပ်ထားကြောင်းသေချာစေပါ - သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပံ့ပိုး! ပိုကောင်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးအတွက် - အလှူရှင်တစ်ဦးအဖြစ်, သင်အများပြည်သူဒေါသ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအလှူငွေလုပ်နေပါတယ်။ ယခု join နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှတစ်ဦးကွန်ကရစ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အရှုပ်တော်ပုံပါစေ။ သငျသညျဘယ်နေရာမှာငါတို့ဥစ်စာအဖြစ်လှူဒါန်းခဲ့သည်အသီးအသီးယူရိုဘို့ဤမျှလောက်ပုန်ကန်မှုများနှင့်တော်လှန်ရေးအရပါလိမ့်မယ်။ ကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုပေးပါ: PixelHELPER.org/Spenden သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကရံပုံငွေရှာuinterstützt: https://www.facebook.com/donate/1972507843071293
#FreeAssange လှုပ်ရှားမှု ဇန်နဝါရီလ 22, 2020အိုလီဗာ Bienkowski
လက်နက်ချခြင်း Android App ဘာရိန်း 13 ဖက်ဒရယ် Chancellery ခြုံမီး တရုတ်နိုင်ငံ လူအစုအဝေးရန်ပုံငွေ မီး ညှဉ်းပမ်း freeRaif လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် Hercules လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေး မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး Catalonia မြေမြှုပ်မိုင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အဘယ်သူမျှမနယ်နိမိတ်သိတယ် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း တိုက်ရိုက်စီး Stream swarm အကူအညီအသက်ရှင်နေထိုင် မော်ရိုကို သတ္တုတွင်း da အိမ်တော်၌ NSA က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ Orlando တွင်အဘို့အသက်တံ့ သံချပ် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ swarm အကူအညီ စပိန်နွေဦး ပီရူလိုင်းနား ဝီဂါ ဥဂါးရ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး လွတ်လပ်ရေး အမေရိက၏ယူနိုက်တက်ရှတာဇီ upcycling လက်နက်ကုန်သွယ်မှု ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ scan! စောင့်ကြည့်မှု